द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | जनवरी 7, 2021 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
हालको परिस्थितिहरूमा, अग्रिम वा तल भुक्तानीको लागि अनुरोध गरिएको नमूना पत्र तपाईंको लागि लाभदायक हुन सक्छ। नगदी प्रवाहको चिन्ताले तपाईंलाई यस समाधानमा बदल्न मद्दत गर्दछ। हामी प्राय: अग्रिम वा डाउन भुक्तानीको बारेमा कुरा गर्छौं। दुई सर्तहरू अस्पष्ट हुन सक्छन्। र धेरै व्यक्तिले तिनीहरूलाई टाढा भन्न सक्दैनन्। विषयको एउटा सानो ध्यानले यसको दुई अभिव्यक्तिको बीचका भिन्नता र समानताहरू विस्तृत रूपमा वर्णन गर्दछ।
अग्रिम वा जम्मा?
कन्फ्युजिंग, यी दुई फार्मूलनहरूले फरक दृष्टिकोण परिभाषित गर्दछ। तिनीहरू पर्यायवाची हुन टाढा छन्। र लेख एल 3251-3 यो याद गर्न लेबर कोड को। सँगै भिन्नता हेरौं
एक अग्रिम एक रकम हो जुन नियोक्ताले आफ्नो कर्मचारीलाई कामको लागि क्रेडिट गर्छन् जुन तिनीहरू निकट भविष्यमा गर्न लागेका छन्। कार्य अझै पूरा भएको छैन, तर कामदारले आफ्नो तलबको केही अंश प्रयोग गर्न सक्नेछ। यो एक मिनी loanण हो जुन इच्छुक पार्टीले आफ्नो काम मार्फत भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाईले आफ्नो मालिकलाई अगस्टको अन्त्य सम्म तपाईको सेप्टेम्बरको तलबको केही अंश भुक्तान गर्न भन्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईको अनुरोध तलब अग्रिमको लागि हो। यस सन्दर्भमा, तपाईंको नियोक्ताले तपाईंलाई अग्रिम भुक्तानी स्वीकृत गर्न वा अस्वीकार गर्न सक्दछ।
तलब अग्रिम कर्मचारी द्वारा निर्दिष्ट एक मुक्त रकम अनुरूप छ। रकम बैंक स्थानान्तरण, नगद वा चेक द्वारा भुक्तान गर्न सकिन्छ। परम्परागत रूपमा, यो अग्रिमको रकम निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ र सबैजनाले त्योमा हस्ताक्षर गर्नु पर्छ। यो प्रतिपूर्ति सर्तहरूको परिभाषा गर्न पनि महत्त्वपूर्ण छ। दुबै पक्षसँग यसको सबै प्रावधानहरूको हस्ताक्षर गरिएको प्रतिलिपि हुनुपर्दछ।
निक्षेप payday अग्रिम भन्दा भिन्न छ। यहाँ हामी कुरा गरिरहेका छौं कि तलबको अंशको अग्रिम भुक्तानी जुन कि कर्मचारीले कमाइसकेका छन। जे भए पनि यो loanण होइन। रुचि पार्टीले उसको निक्षेपमा अनुरोध गरेको रकम उसले प्राप्त गरेको रकमसँग मिल्छ। यस व्यक्तिले सोधेको छ कि उसको तलबको केही अंश भुक्तानको मिति सामान्य मितिको तुलनामा अगाडि ल्याइन्छ।
रिड व्यावसायिक ईमेल हस्ताक्षर
यी सर्तहरूको अन्तर्गत, यो ध्यान राख्नु पर्छ कि निक्षेप व्यक्तिगत व्यक्तिको मासिक तलब भन्दा बढि हुनु हुँदैन। यसबाहेक, श्रम कोडको लेख एल 3242-1 ले यस विषयमा थप जानकारी प्रदान गर्दछ। उनले उल्लेख गरे कि एक कर्मचारीले पन्ध्र कार्य दिनहरूको राशि अनुरुप निक्षेप अनुरोध गर्न सम्भव छ, जुन उसको मासिक पारिश्रमिकको आधा बराबर हो।
यो संकेत गर्दछ कि महिनाको पन्ध्रौं देखि, कर्मचारी संग दुई हप्ता काम तुलना गर्न एक निक्षेप अनुरोध गर्न कानूनी अधिकार छ। यो सहि हो कि उसको रोजगारदाताले उनलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन्।
कुन सर्तहरूमा रोजगारदाताले निक्षेप वा तलबमा अग्रिम लिन अस्वीकार गर्न सक्दछन्?
अनगिनत अवस्थाहरू खेलमा आउँदछन् र निर्णय गर्दछ कि निक्षेप भुक्तान गर्ने वा तलबमा अग्रिम। नियम र सर्तहरू कर्मचारीको स्थिति अनुसार फरक हुन्छन्, तर अनुरोधको प्रकृति अनुसार।
Payday अग्रिम सम्बन्धमा, तपाइँको मालिक स्वीकार गर्न वा अस्वीकार गर्न स्वतन्त्र छ। जे होस्, यदि तपाइँ उसलाई तपाइँको अनुरोध को समर्थन को लागी प्रमाण प्रदान गर्नुहुन्छ। कुनै पनि उपयोगी जानकारी जुन तपाईंको पक्षमा तराजुहरू टिप गर्दछ। तपाइँले अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुपर्दछ।
तपाईंको कम्पनी तपाईंको तल भुक्तानी अनुरोध स्वीकार गर्नको लागि कानून द्वारा आवश्यक छ। यद्यपि यो नियम अपवादहरूको विषय हो। यो निक्षेप अस्वीकार गर्न सम्भव छ यदि अनुरोध एक घर कामदार, एक रुकावटदार कामदार, मौसमी कामदार वा अस्थायी कामदारहरूबाट आयो भने।
एक payday अग्रिम को लागी तपाइँको अनुरोध कसरी लिने?
जब सम्म तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ। र त्यो तपाईंलाई एक payday अग्रिम दिइनेछ। एक पत्र स्थापना गर्न श्रेयस्कर जुन तपाईं पुन: भुक्तानीको लागि सर्तहरू सेट गर्नुभयो। यदि सम्भव भएमा रसिदको स्वीकृति सहित दर्ता गरिएको मेल मार्फत तपाईंको पेरोल अग्रिम अनुरोध पत्र पठाउनुहोस्। वास्तवमा, रसिदको स्वीकृतिसहित दर्ता गरिएको मेल मार्फत पठाउँदा कानुनी कागजात बन्छ। विवाद को मामला मा एक अनिवार्य। थप रूपमा, यस विकल्पसँग सरल, छिटो र कम खर्चिलो हुने गुण छ।
रिड डाउनलोड गर्न समय बचत खाता पत्र टेम्पलेट
Payday अग्रिम अनुरोध पत्र
विषय: तलबमा अग्रिमको लागि अनुरोध
यो धेरै जीनको साथ हो जुन म तपाईंलाई मेरो व्यक्तिगत चिन्ताको बारेमा सूचित गर्दछु। (तपाईंको समस्या निर्दिष्ट गर्नुहोस्), मसँग योग हुनुपर्दछ (राशि सोध्नुहोस्) स्थिति समाधान गर्न। यसको एक परिणामको रूपमा, मैले तपाईंलाई तपाईंको तलबमा अग्रिमको लागि अपवादको रूपमा सोध्नु पर्छ जुन मलाई तत्काल चाहिने रकमसँग मेल खान्छ।
मँ विचार गर्दैछु यदि तपाईं मलाई आफ्नो समर्थन दिन सहमत हुनुहुन्छ, आठ महिना भित्र जम्मा रकम फिर्ता गर्न। यसका लागि, मेरो अर्को तलबबाट मासिक कटौती यस अवधिमा गरिनेछ। यसले मलाई उधारो रकम तपाईं र मेरो परिवारका लागि स्वीकार्य दरमा फिर्ता गर्न अनुमति दिँदछ।
मँ मेरो अनुरोध मा तपाईले चासो को लागी धन्यवाद छ। कृपया, स्वीकार गर्नुहोस् महोदया, सर, मेरो विशिष्ट भावनाहरु को अभिव्यक्ति।
कसरी कर्मचारीले आफ्नो रोजगारदाताबाट निक्षेप अनुरोध गर्न सक्छ?
व्यक्ति कागजमा साधारण अनुरोध, पोष्ट वा इलेक्ट्रोनिक रूपमा जम्मा गर्न सक्दछ। केही संस्थाहरूमा, तल भुक्तान अनुरोध फारमहरू उपलब्ध छन् जो तिनीहरूबाट लाभ लिन चाहन्छन्। यस प्रविधीले मागलाई मानकीकृत गर्न र कर्मचारीहरूका लागि सजिलो बनाउन मद्दत गर्दछ।
अन्य संगठनहरूमा, अनुरोध आन्तरिक सफ्टवेयरमा सिधा गरिन्छ। यो सीधै पेरोल सफ्टवेयर एकीकृत गर्दछ एक पटक कम्पनीको पेरोल प्रबन्धक द्वारा मान्य।
रिड रिपोर्ट:4आवश्यक अंकहरू सफल हुन जान्न
साधारण जम्मा अनुरोध पत्र
विषय: तलबमा निक्षेपको लागि अनुरोध
हाल एउटा नाजुक वित्तीय स्थितिमा, म तपाईंलाई अनुरोध गर्दछु कि कृपया मलाई हालको महिनाको लागि मेरो तलबमा तल भुक्तान गर्नुहोस्।
मलाई थाहा छ तपाईंले कानूनको रूपमा प्रदान गर्दछ। पन्ध्र दिन काम गरे पछि यस प्रकारको अनुरोध गर्न आवश्यक पर्ने कुनै पनि कर्मचारीलाई। यो यस सन्दर्भमा छ कि म [यूरोमा राशि] को योग को भुक्तानी को फाइदा लिन चाहन्छु।
मेरो अनुरोध अनुपालन को लागी तपाईलाई धन्यबाद, कृपया म्याडम / सर, मेरो शुभकामना को अभिव्यक्ति।
डाउनलोड गर्नुहोस् "Payday अग्रिम अनुरोध लेटर.डॉक्स"	लेटर अफ रिक्वेस्ट-पगारी-एडभान्स.डॉक्स - times पटक डाउनलोड गरियो - १ K केबी
डाउनलोड गर्नुहोस् "अनुरोध को पत्र - dacompte-simple.docx"	अनुरोध पत्र dacompte-simple.docx - २ पटक डाउनलोड गरियो - १ K Kb
एक अग्रिम वा निक्षेप अनुरोध गर्न पत्र टेम्पलेट जनवरी 8th, 2022Tranquillus
अघिल्लोभुक्तानी बिदा र आरटीटी: अस्पताल स्टाफका लागि बोनस
निम्नराष्ट्रिय प्रोटोकल: १००% लाई टेलिworking्कको सिफारिसमा छुट